घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू पोर्तुगाली फुटबल खेलाडीहरू राफेल गुरेरो बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो राफेल ग्वेरियोको जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, आमा बुबा, पत्नी, जीवनशैली, व्यक्तिगत जीवन र नेट वर्थको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, यो उनको जीवनको कहानीको एक पूर्ण विश्लेषण हो, शुरूको दिनदेखि लिएर जब उहाँ प्रसिद्ध हुनुभयो।
राफेल गेरिरियो बायोग्राफी स्टोरी- आफ्नो बाल्यकालको समयदेखि जब उहाँ प्रख्यात हुनुभयो। 📷: LeParisien र Picuki
हो, तपाईं र म फुटबलरलाई चिन्छु, जो उपनाम राखिएको छ “ब्याट्री"बीचमा छ विश्व फुटबलमा सर्वश्रेष्ठ बाँया बैकहरू। जहाँसम्म, हामीले महसुस गर्‍यौं कि तपाईंले राफेल गुरेरियोको जीवनीको पूरा प्रतिलिपि पढ्नु भएको छैन, जुन हामीले तयार गरेका छौं र प्रभावशाली छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
राफेल गुरेरो बाल्यकाल कहानी:
शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उसका पूरा नामहरू राफेल अडेलिनो होसे गुएरेरो हो। पोर्तुगाली फुटबलर डिसेम्बर १ 22 1993 of को २२ औं दिनमा फ्रान्सको उत्तरपूर्वी उपनगरहरू पेरिसको ले ब्लान्क-मेस्निलमा बस्ने उनका बुबा (कारखाना कामदार) र उनको आमा (गृहिणी) को जन्म भएको थियो।
यदि तपाईंलाई थाहा थिएन, Moussa Sissoko बाँया-खुट्टा प्लेयरको साथ समान जन्म स्थान साझा गर्दछ। फ्रान्सेली मिडियाका अनुसार, राफेल गुरेरियोको जन्म5परिवारमा भएको थियो, जसमा उनका बाबु र तीन दाजुहरु छन्। उहाँ आफ्ना भाइहरूमध्ये कान्छो हुनुहुन्छ।
उनको नाम "राफेल" को कारण, तपाईं मसंग सहमत हुनुहुन्छ कि गुरेरो इसाई परिवारमा जन्मेको थियो। साथै, नाम हिब्रूबाट आएको हो, जसको अर्थ हो "भगवान च He्गाइ।" अन्तिम तर कम्तिमा होइन, यो उपचारको लागि जिम्मेवार मुख्य देवदूतको पनि हो।
राफेल गुरेरो परिवार पृष्ठभूमि:
पहिलो र सबैभन्दा पहिला, बाँया पछाडि, जस्तै उसको पुर्तगाली टीम साथीहरू- रिकार्डो परेरा र Diogo Jota, एक धनी घर मा जन्म भएको थिएन। राफेल गुरेरियोका बाबुआमा त्यस्तो प्रकारका थिएनन् जसले उनलाई सबैभन्दा महँगो खेलौना किन्न सकिनन्, तिमीले उनीहरूलाई कुनै फुटबल लिन मिल्दैन।
पहिले नै पत्ता लगाईएको छ, बुबाले एक कारखाना मजदुर र गृहिणी छ जो एक आमा हुनुहुन्छ मतलब एक मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँछ। त्यस पछि, भाडा लागत कम गर्न, राफेल गुरेरोको परिवार पेरिस शहरको केन्द्रमा 32२ मिनेटको दुरीमा रहेको फ्रान्सेली उप-अर्ब ले ब्लान्क-मेस्निलमा बसोबास गर्नुपरेको थियो।
राफेल गुरेरो परिवार मूल:
सरल शब्दमा, फुटबलर आफ्नो पुर्खाको सम्बन्धमा, आधा पुर्तगाली र आधा फ्रान्सेली हो। के तपाईंलाई थाहा थियो?… राफेल गुरेरियो फ्रान्सेली आमा र पोर्चुगली बुबामा जन्मेका थिए। बायाँ पछाडि, जसले आफ्नो मातृ मूल फ्रान्सबाट आएको भए पनि लामो समयदेखि उसले पोर्तुगाली परिवारको जरा स्वीकार्यो।
राफेल गुरेरियो प्रारम्भिक जीवन- कसरी फुटबल शुरू भयो:
प्रत्येक बच्चाको लागि जो एक पेशेवर फुटबलर बन्न चाहन्छ, एक चीज सर्वव्यापी हो। यो आइडलको लागि समानता बाहेक अरू केही होईन। के तपाईंलाई थाहा छ?… जवान राफेल गुरेरो, उसको बाल्यकालका दिनहरू, पोर्चुगाली स्ट्राइकर, पाउलेटाको ठुलो प्रशंसक थिए।
राफेल गुरेरियोले युवावस्थामा पोर्तुगाली स्ट्राइकर, पाउलेटाबाट प्रेरणा लिएका थिए। 📷: पोर्तुगासीएजे र बर्निज
मेरो बुबाआमाको घरमा भित्तामा अझै पाउलेटाको चित्रहरू छन्
गुरेरियोले एकपटक ला'एक्इप- फ्रान्सेली राष्ट्रव्यापी दैनिक अखबारमा भने। उनले जारी राखे;
मैले पोर्तुगाली स्ट्राइकर, पाउलेटाको बुद्धिमत्ताबाट धेरै कुरा सिके। ऊ त्यस्तो मान्छे हो जसले खेल उसको टाउकोमा खेल्छ र उसको खुट्टाले मात्र होइन।
दुई वर्षको लिग १ खेलाडी, पाउलेटाले एक युवाको रूपमा उनीमाथि सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पारेको थियो। युवा गुरेरियोका लागि, प्रशस्त गोल स्कोरर केवल एक लिग १ लीजेन्ड थिएन, तर उनलाई खेलाडी जसले पुर्तगाली फुटबललाई मात्र नभई आफ्नो बुवाको उत्पत्ति पोर्तुगाललाई पनि प्रेम गर्थे।
सकर १ 1999 XNUMX। मा फुटबलप्रति असीम प्रेमले सानो गेरिरियो देख्यो र उनी आफ्नो परिवारको घरबाट केही मिटर टाढा ब्लान्क-मेस्निल भन्ने स्थानीय टोलीमा भर्ना भए। एमेच्योर युवा फुटबल खेलको of बर्ष पछि, जवानले पछि उचित युवा क्यारियर शुरू गर्नका लागि सही महसुस गरे।
राफेल गुरेरो जीवनी- प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
सम्झनुहोस् कि यूरो २०० tournament टूर्नामेन्ट? ... हो, यो युवाका लागि ठूलो प्रेरणा हो किनकि यस प्रतियोगिताले आफ्नो भर्खरको मूर्तिको घोषणा गरेको देख्यो, जो पुर्तगालको सबैभन्दा महान खेलाडी मध्ये एक हो। सी रोनाल्डो। युरो २०० 2004 पछि, जवान नजिकैको फ्रान्सेली प्रतिष्ठानहरूमा परीक्षणमा भाग लिन उत्सुक भए।
परिवारका सदस्यहरूको खुसीको लागि, राफेल गेरिरियोको संकल्पको प्रतिफल भयो किनभने ती जवान व्यक्तिलाई फ्रान्सेली एलाइट एकेडेमी आईएनएफ क्लेयरफोटेनले बोलाए। फ्रान्सेली फुटबल संघ द्वारा सुपरिवेक्षण गरिएको एकेडेमी प्याराम्पिंग बच्चाहरूलाई थिएन।
प्रारम्भमा, आईएनएफ क्लेयरफोन्टेनले गुरेरोलाई चाँडै कसरी खेल्ने भनेर सिक्न बाध्य पारे, यस्तो काम जसले उनलाई आजको तारीखमा अनिवार्य रूपमा मद्दत पुर्‍यायो। नबिर्सनुहोस्, युवा परिपक्वता, प्रविधि र फ्रि किक क्षमताहरूले उनको युवा प्रशिक्षकले उनलाई कप्तान बनाएको देखे।
राफेल गुरेरो लाइफ स्टोरी- उसको शुरुआती क्यारियर दिनहरू हेर्नुहोस्। ।: LeParisien।
उनी एक युवा खेलाडीका रूपमा कत्तिको उज्जवल थिए भन्ने कुरा गर्दै उनका एक टोलीले भनेका थिए;
उनी टोलीमा सबैभन्दा निर्णायक खेलाडी थिए, इभान टानकिओ, १ ex वर्षमा उनको पूर्व टीमका साथीले भने। सीआर like जस्तै, ऊ सबै सेट किकहरू धेरै सफलतापूर्वक शूट गर्दै थियो।
राफेल गुरेरियोका अभिभावकहरूले उनलाई फसाउनको लागि गरे:
पछिल्लो दिन, यो उनको आमा र बुबा को लागी एक घण्टा ड्राइव लिए उनलाई युवा एकेडेमी क्लेरफोन्टेन, जहाँ उसले आफ्नो फुटबल खेलेको थियो। राफेल गुएरेरो जिद्दी गर्दछन्, कि उनको सबैभन्दा उत्तम स्मृति उहाँकै बाबुआमाले उनलाई फकाउने समय भएको थियो चोरिजो स्यान्डविच, एक उपहार जुन हरेक पटक आयो उसले उत्कृष्ट प्रदर्शन राख्छ।
फ्रान्सेली समाचारपत्रका अनुसार स्यान्डविच प्राप्त गर्नुलाई 'प्यारा सानो पाप' ठानिन्थ्यो। जब त्यो जवान मानिस खायो, ऊ सधैँ आफ्ना साथीहरूलाई सानो टुक्रा प्रदान गर्न सम्झन्थ्यो। वास्तविकतामा, उसले पिचमा र दुबै दुबै उदारले देखेको थियो।
राफेल गुरेरियो जीवनी- फेम कहानी कहानी:
फ्रान्सको प्रख्यात क्लेरफोन्टेन एकेडेमीमा आइसकेपछि, उदाउँदो ताराले १ 14 वर्षको उमेरमा धेरै टाढा सर्ने निर्णय गरे जुन लगभग २253.3..XNUMX किलोमिटर टाढा आफ्नो परिवारको घरबाट स्टेड माल्हेर्बे क्यानसँग खेल्न। एकेडेमीमा, परिपक्व केटा उडान र colors्गको साथ युवा देखि वरिष्ठ फुटबलमा स्नातक।
सफलतापूर्वक क्यानबाट स्नातक गरेपछि, राफेल गुरेरियो, जस्तै उनका धेरै साथीहरूले क्यान रिजर्भ टोलीको लागि खेल्न शुरू गरे। त्यहाँ हुँदा, उहाँ आफ्ना टीमका साथीहरू भन्दा माथि उठ्नुभयो, एउटा यस्तो उपलब्धि जसले उहाँलाई क्लबको वरिष्ठ टोलीमा तुरुन्तै प्रक्षेपण गर्‍यो। वरिष्ठ टोलीमा समेत उसको शेयर बढ्न जारी छ। सँधै सी रोनाल्डोबाट प्रेरणा लिने यो केटीले आफूलाई सुन्दर फ्री-किकहरू स्कोर गर्न प्रतिष्ठा कमाइरहेको देख्यो।
उनको बहादुरीका लागि धन्यवाद, एफसी लोरिएन्ट, र पोर्चुगल U21 कोचले ध्यान लिए र आफ्नो हस्ताक्षर प्राप्त गर्ने नाममा केन फुटबल क्लबमा छापा मार्न आए। एफसी लोरिएन्टमा, राफेल गुरेरो एक मुक्तिदाता बन्नुभयो। के तपाईंलाई थाहा छ?… एफसी लोरिएन्टलाई रिलीगेशनबाट बचाउनमा उनको भूमिकाले उसको सबैभन्दा ठूलो सपना साकार हुन थाल्यो। चमत्कारी ढ the्गले, उदाउँदो ताराले यूरो २०१ Portuguese मा खेल्न पोर्तुगाली कल-अप प्राप्त गर्‍यो।
राफेल गुरेरियो जीवनी- फेम टु फेम स्टोरी:
सबै नहुनु भन्दा पनि पुर्तगालीले आफ्नो बाल्यावस्थाको सपना पूरा गरे जुन उनको राष्ट्रिय पक्षको अभिन्न हिस्सा बन्न पुगे जसले युरो २०१ 2016 मा फ्रान्सेली मुटु तोडे। प्रशंसकहरूले राफेल गुरेरोलाई उपनामको साथ प्रशंसा गरे - 'ब्याट्री' - उनको प्रशस्त उर्जाका लागि सबै धन्यवाद पिच, टूर्नामेन्टको बखत।
बाँया-मिडफिल्डरले युरो २०१ 2016 टूर्नामेन्टमा उनका प्रयोगको लागि धन्यबाद, "ब्याट्री" उपनाम पायो। ।: IG
यूरो २०१UR मा यस अवसरमा बढे पछि, शीर्ष प्रदर्शनकर्ताले शीर्ष यूरोपियन क्लबहरूको एक समूहलाई आकर्षित गर्न थाले। ती मध्ये एक थियो थमस टुकेलs बरुसिया डार्टमन्ड जसले आफ्नो सेवाहरूको लागि m १२ लाखको क्षेत्रमा कही एफसी लोरिएन्ट तिरेका छन्।
राफेल गुरेरियोको जीवनी लेख्ने क्रममा, फुटबलरले पक्कै पनि उनलाई क्लब र राष्ट्रिय स्तर दुवैमा प्रदान गरिएको प्रत्येक अवसरको फाइदा उठायो। तलको प्रमाणले लेबल गरिएको व्यक्तिको भोल्युम बोल्दछ एक काउन्टर-हमलावर बराबर उत्कृष्टता.
हामीले राफेल गुरेरियोको सफलता कहानीको सारांश एकत्रित गरेका छौं। निरीक्षण गरेझैं, फूटबलरले सफल क्यारियरको लागि आवश्यक पर्ने सबै कुरा जित्यो।
सुन्दर फ्री-किकहरू, उनका अन्य शक्तिहरू मध्ये एक, राफेल गेरिरियोको शस्त्रास्त्रको बर्षहरूमा एक प्रमुख हतियार भएको छ। त्यसमा कुनै अचम्म छैन कि उनलाई एउटा को रूपमा लेबल गरिएको छ सर्वश्रेष्ठ बाँया पछाडि उसको पुस्ताको। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
राफेल गुरेरियोकी पत्नी र बच्चाहरू:
त्यहाँ एक भनाइ छ कि हरेक सफल पुरुषको पछाडि, एक महिला छ। हाम्रो मामलामा, राफेल गुरेरियो जस्ता सफल खेलाडी पछाडि, त्यहाँ एक प्रेमिका थिइन जो पछि उनको ग्लैमरस पत्नी बनिन्। उनी अरू केहि अश्वेत महिला हुन् जसले मेरिन नामबाट जान्छन्।
राफेल गेरिरियोको श्रीमती, मेरियनलाई भेट्नुहोस्। उनी अहिलेसम्म उनको सफलता पछाडि महिला हुन्।
सोशल मिडिया स्रोतहरूबाट, यो राफेल गुरेरियोकी श्रीमतीको रूपमा देखिन्छ, मार्रियनले आफ्नी श्रीमतीको रुपमा २०१ 2016 को आसपास बन्नु भन्दा पहिले उनी एक प्रेमिकाको रुपमा शुरु गरे। यति सम्भव छ कि दुबै प्रेमीहरूको निजी बिहे पनि केवल नजिकका परिवार र साथीहरूसँगै थियो। उनीहरूको विवाह साँच्चै धन्यको हो।
राफेल गुरेरियोको श्रीमती र छोरालाई भेट्नुहोस् एउटा सुन्दर जल प्रवाह गन्तव्यमा।
दुबै प्रेमीहरू उनीहरूको पहिलो छोरा सच्चाको अविभावक भए, जुन २०१ 2014 को पछि जन्मिएको थियो। अगस्त २०१ August को १ around औं दिन, राफेल ग्युरेरो र उनकी श्रीमतीले एक बच्चा केटी 'अना' लाई उनीहरूको घरमा स्वागत गरे।
तपाईंले अवलोकन गर्नुहोला, पोर्तुगाली यूरो विजेता आफ्नो परिवारको बारेमा धेरै निजी राख्न मन पर्छ। उदाहरण को लागी, उनले आफ्ना बच्चाहरु को सबै अनुहार, आमा बुबा, भाईबहिनी (उनकी पत्नी बाहेक) सार्वजनिक दृष्टिकोणबाट टाढा राखिएको सुनिश्चित गर्दछ। त्यसपछिका सेक्सनमा हामी तपाईंलाई उहाँ कस्तो किसिमको बुबा हुनुहुन्छ बताउनेछौं।
हामीले यो तथ्यलाई पुष्टि गर्यौं कि २०२० सम्म, राफेल गुरेरियोकी श्रीमतीले उनका लागि दुई बच्चा जन्माएकी छन्।
उसको शुरुआती क्यारियर बर्षको कथालाई हेर्दा, यस्तो देखिन्छ कि राफेल गुरेरियोका अभिभावकसँग सधैं उहाँसँग राम्रो हुनको लागि बाटो थियो। पछिल्ला दिनहरूमा उनीहरूले उसलाई मन पर्ने चुरिजो स्यान्डविच प्रयोग गरी घूस दिए। अब फुटबलरहरू उसको छोरालाई नक्कल गर्न थाले, तपाईं आफ्नै तरिकाले।
आज, राफेल गेरिरियोको परिवारलाई फुटबल खेलाडीहरूको अर्को पुस्ताको आवश्यकता छ, र यो केवल उनको छोरो मार्फत आउन सक्छ। आधुनिक समयको बुबाको रूपमा, BVB स्टारको अब दायित्व छ। उसको पहिलो रणनीति त्यो बुबा-छोराको बन्धन बनाउने हो। त्यो प्राप्त गर्ने उत्तम तरीका भनेको डिज्नी भूमिमा समय व्यतीत गर्नु हो। कसलाई थाँहा छ! आफ्नो बुबाको लागि सानो केटाको प्रेमले उसलाई फुटबललाई आफ्नो गन्तव्यको रूपमा स्वीकारेर फेला पारेको हुन सक्छ।
पिता-पुत्र सम्बन्ध भविष्यको लागि आवश्यक छ।
राफेल गुरेरियो व्यक्तिगत जीवन:
फुटबल स्टारले पिचबाट के गर्छ भनेर जान्नु तपाईंलाई उनको व्यक्तित्वको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। र सबैभन्दा पहिला, राफेल ग्युरेरो कोही हुनुहुन्छ जो उहाँमा, स्वतन्त्रताको आन्तरिक राज्य वा साधारण शब्दहरूमा; ऊ एक अंतर्मुखी को अधिक छ।
फुटबल गतिविधिहरु बाट टाढा, BVB स्टार आफ्नो मनपर्ने शौक को शीर्ष मा आफ्नो घर मा हुन सक्छ। अनुमान गर्नुहोस् यो के हो?… यो टिभी श्रृंखलाहरू हेर्ने बानी छ। तल अवलोकन गरिए अनुसार, राफेल गुरेरो एक ठूलो नेटफ्लिक्स फ्यान हो, जो एक दिनभर मिडिया-सेवाहरूमा ट्यून गर्न सक्दछ। प्रमाणको रूपमा, यहाँ उनको उदाहरण छ नेटफ्लिक्स टिभी श्रृंखला "नार्कोस" हेर्दै।
राफेल गुरेरियो निजी जीवन- फुटबलर मनपर्दो मनपर्दछ नेटफ्लिक्स श्रृंखला देखाउँदा ऊ फुटबल खेलिरहेको छैन।
यति मात्र आफ्नो व्यक्तिगत जीवन मा, यदि फुटबलर नेटफ्लिक्स मा ट्यून छैन, उसले आफ्नो छोराको साथमा भिडियो गेम खेल्न आफ्नो समय खर्च गर्न रुचाउँदछ। तल हेर्नुहोस्, यो देखिन्छ कि उसले सजिलो आफ्नो छोरालाई उसको खेलको शौकमा शुरू गर्न सजिलो पायो।
प्लेस्टेशन परिवार जीवन वास्तविक छ। आफ्नो दुई वर्षको छोरा समावेश छ भनेर प्रमाणित गर्दछ।
राफेल गुरेरो लाइफस्टाइल:
यस खण्डमा, हामी तपाईंलाई यो भन्छौं कि फुटबलरले पैसालाई कसरी देखिन्छ, उसको कुल सम्पत्ति र उसले कसरी आफ्नो ज्याला खर्च गर्दछ। सबैभन्दा पहिला, रफेल गुरेरियोका अभिभावकहरूले उनलाई खर्च र बचतको बिच कसरी स्वस्थ सन्तुलन कायम गर्ने बारेमा राम्रो घर प्रशिक्षण दिएका थिए।
अधिकांश भागका लागि, यूरो २०१ winner को विजेताले सार्वजनिक रूपमा विदेशी जीवनशैली प्रदर्शन गर्नमा विश्वास गर्दैनन् - एक मुट्ठी भर चम्किला कारहरू, ठूला हवेलीहरू / घरहरू इत्यादि द्वारा सजिलैसँग सजिलै देख्न सकिने। उसको वर्तमान सम्पत्ति Eur मिलियन यूरो र २०२० को बजार मूल्य अधिक २ M मिलियन यूरो अझै पनी उनलाई हैरान पार्छ। राफेल गुरेरियोले एक पटक उनको सम्पत्तिको बारेमा बोलेका थिए - उनको शब्दहरूमा;
जब मैले मेरो पुरानो क्लब काइनलाई लोरेन्टमा छोडेँ, मलाई विश्वास लाग्दैन कि म € m worth को मूल्यको हुँ। त्यो मेरो लागि धेरै पैसा थियो, विशेष गरी मलाई थाहा थियो कि म लिग २ बाट बाहिर आउँदैछु। " मेरा आमा बुबा मेरो भन्दा म धेरै आश्चर्यचकित थिए।
मेरो लागि एक वचनको रूपमा, मैले मेरो शुल्कमा बाँच्न र आफ्नो योग्यताको प्रमाणित गर्न प्रयास गरें। त्यसोभए, मैले केहि समयमा भनें: 'के भइरहेको छ?' ठूलो नेट वर्थ भएकोले तपाईंलाई आत्मविश्वास महसुस गराउन सक्छ।
राफेल गुरेरो पारिवारिक जीवन:
फुटबलरहरूको जीवनी कथाहरू लेख्ने हाम्रो अनुभवमा, हामीले यो महसुस गर्यौं कि करीव बुनिलो परिवार भएका खेलाडीहरूसँग सम्बन्धको ठूलो भावना रहेको छ। यस सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई राफेल गुरेरियोका अभिभावकका साथै परिवारका सदस्यहरूसँगको उनको सम्बन्धमा थप तथ्यहरू दिन्छौं।
राफेल गेरिरियो बुबाको बारेमा:
सबैभन्दा पहिला र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनका बुबा एक पटक ब्लान्क-मेस्निलको साथ एमेच्योर फुटबलर थिए, जहाँ क्लबले उनका छोराले युवावस्थाको क्यारियर शुरू गरे। एक असफल फुटबल क्यारियरलाई धन्यवाद छैन, राफेल गुरेरियोका बुबाले पेरिसको नजिकको कारखानामा काम गर्न अगाडि बढ्नुभयो।
के तपाईंलाई थाहा छ? ... घमण्डी बुबाले आफ्नो छोरा एक पटक स्ट्राइकरको रूपमा खेल्न चाहेका थिए तर ब्लान्क-मेस्निल प्रशिक्षकहरूसँग भेट गरे जसले गिरेरोलाई उनको बायाँ-मिडफिल्ड वा बाँया-पछाडि अवस्थित रहन आग्रह गरे। प्रतिरोध गरेपछि, क्लब व्यवस्थापन डराए कि बुबाले उनका छोरालाई क्लबबाट बाहिर निकालिदिनेछन्। तिनीहरूका लागि भाग्यशाली, त्यो भएन।
राफेल गुरेरोको आमाको बारेमा:
पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सुपर आमा भनेको पिरोमा राम्रो प्रदर्शन गर्दा हरेक पटक उसको छोरालाई मोहित पार्ने तरीकाको रूपमा चोरिजो स्यान्डविच किन्ने त्यो सुन्दर विचारको पछाडिको मस्तिष्क व्यक्ति हो।
यसको साथमा, राफेल ग्युरेरोको आमा पनि धेरै सुरक्षात्मक छ। उनले एक पटक ब्लान्क-मेस्निल (उनको युवा एकेडेमी) लाई आफ्नो छोरालाई जोगाउन जबरजस्ती गरे किनभने उनी आफ्नो उमेर र टीमका अन्य भन्दा १० सेन्टिमिटर छोटो थिए। लक्ष्य छोटो राफेलको लागि विशेष गरी प्रशिक्षण पछि आफ्नो टीमका साथीहरूसँग शारीरिक प्रतिस्पर्धा नगर्न हो।
राफेल गुरेरो भाइको बारेमा:
पोर्तुगाली पुरुष बच्चाहरूको परिवारबाट आएको हो। उसको परिवारमा, एकमात्र महिला आफ्नो आमा बन्न जान्छ। राफेल गुरेरियोका दुई भाइहरूमध्ये यो सबैभन्दा जेठो देखिन्छ, इमानुएल अर्को भाइ भन्दा बढी चिनिएको छ। के तपाई तलको फोटोबाट ठुलो भाई इमानुएलको तस्वीर लिन सक्नुहुन्छ?
राफेल गुरेरियो भाई, इमानुएल गुएरेरोलाई भेट्नुहोस्। उहाँ बायाँ भूमिकाबाट दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ।
राफेल गुरेरो अनटोल्ड तथ्यहरू:
हाम्रो बाल्यकाल कहानी र जीवनी लेखनको यस अन्तिम अंशमा हामी तपाईंलाई केही सत्य प्रस्तुत गर्नेछौं जुन तपाईंलाई 'ब्याट्री' को बारेमा कहिले थाहा थिएन।
तथ्य # १- तलब ब्रेकडाउन:
जून २०१ 16 को १ 2016 औं दिनमा, राफेल गुरेरियोले बरुसिया डोर्टमुन्डसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे जसमा उनले प्रति बर्ष १ 1,979,040,, ,०० युरो तलब पक्रेको देखेका थिए। उसको तलब साना बिटहरूमा भाँचे पछि हामीसँग निम्न छ।
प्रति वर्ष € 1,979,040 £ 1,764,146 $ 1,907,386
प्रति महिना € 164,920 £ 147,012 $ 158,949
प्रति हप्ता € 38,000 £ 33,874 $ 36,624
प्रति दिन € 5,428.6 £ 4,839 $ 5,232
प्रति घण्टा € 226 £ 202 $ 218
प्रति मिनेट € 3.8 £ 3.4 $ 3.6
प्रति सेकेन्ड € 0.06 £ 0.056 $ 0.60
तपाईंले राफेल गुरेरो देख्न शुरू गर्नुभयोबायो, यो उसले कमाएको हो।
तथ्य # १- औसत मानिससँग तलब तुलना:
के तपाईंलाई थाहा छ?… औसत फ्रान्सेली नागरिक जसले एक महिना around २2,999। कमाउँछ उसले4बर्ष र months महिना काम गर्नुपर्नेछ राफेल गुरेरियोले एक महिना प्राप्त गर्ने कुराको लागि।
अझ, महिनामा German who who० युरो कमाउने औसत जर्मन नागरिकले राफेल गुरेरोको मासिक तलब कमाउन करिब years बर्ष र सात महिना काम गर्नुपर्नेछ।
अन्त्यमा, औसत पोर्तुगाली जसले प्रतिमहा ११1188 यूरो कमाउँछन्, उसले आफ्नो मासिक तलब कमाउनका लागि एलिब्रु १ years वर्ष छ महिना काम गर्नुपर्नेछ।
तथ्य # १- उसले एकचोटि अविश्वसनीय गोल बनाए:
के तपाईंलाई थाहा थियो?… प्रशिक्षणमा राफेल गुरेरियोले स्कोर गर्ने अपमानजनक स्पिनि back ब्याकहेल भलि एक पटक भाइरल भयो। भिडियो (तल) उहाँको उल्लेखनीय टेक्निकल क्षमता र रणनीतिक लचिलोपनको प्रमाण हो जुन वास्तवमा उसको सब भन्दा ठूलो शक्ति हो।
राफेल गुरेरियोको जीवनी लेख्ने समयमा, फुटबलर (उमेर २ 26) सँग उनको नाममा धेरै राम्रा गुणहरू छन्। तपाईं 30० होइन, तर overall 83 वर्ष उमेरमा समग्र रेटिंग निर्धारणको मतलब, त्यहाँ बढ्नको लागि अझै धेरै वर्ष छ। अन्त्यमा, हामी राफेल गुरेरोलाई आफ्नो फिफा सम्भावित स्कोरको लागि अंडर-रेटेड मान्दछौं।
फिफा सम्भावितले देखाउँदछ कि ऊ वास्तवमै उसको व्यापारमा उत्कृष्ट छ।
तथ्य # १- उसको पुर्तगाली अर्डर अफ मेरिट ऑनर छ:
हाम्रो आफ्नै राफेल गुरेरियो केवल शीर्षकको एक विजेता हैन। के तपाईंलाई थाहा छ? ... उसले एकचोटि 'प्राप्त गर्योपुर्तगाली आदेशको मेरिट। ' यो पुरस्कार सामान्यतया ती मध्ये जान्छन् जसले आफ्नो मेधावी कार्य वा सेवा मार्फत देशलाई गौरव दिन्छन्। पोर्चुगलले यूरो २०१ 2016 लाई जित्न मद्दत गरेपछि राफेल गुरेरियो उनको गिरोहसँगै पुरस्कार प्राप्तकर्ता भए।
बाँया विger्गर र उसको गिरोह हेर्नुहोस्। उनीहरू सबैले २०१ Eur को यूरो २०१ to को धन्यवाद पुर्तगाली अर्डर अफ मेरिट प्राप्त गरे
हामीले एउटा टेबल तयार गरेका छौं जसले राफेल गुरेरियो बायोग्राफी तथ्यहरूको बारेमा केहि संक्षिप्त जानकारी प्रकट गर्दछ। उद्देश्य तपाइँ पोर्तुगाली खेलाडीको प्रोफाइल मार्फत स्किम गर्न क्षमता दिन छ।
पुरा नाम: राफेल एडेलिनो जोसे गुएरेरो
जन्मे: २२ डिसेम्बर १ 22 1993 Le, Le Blanc-Mesnil, फ्रान्स मा।
अभिभावक: आमा (फ्रेन्च पूर्वज) र पिता (पोर्तुगाली वंश)
Siblings: इमानुएल गुएरेरो
उचाइ: 1.70 मीटर (5 फुट7मा)
रुचि: टिभी श्रृंखला हेर्दै र PS4 प्ले गर्दै।
खेल्ने स्थिति: बाँया पछाडि / मिडफिल्डर
नेट मूल्य: M. M मिलियन यूरो
राफेल गुरेरोको बाल्यकाल कहानी र जीवनी मा यो मूल लेखन पढ्न को लागी धन्यबाद। तपाईंले सायद अवलोकन गर्नुभएजस्तै, फुटबलरको बारेमा त्यहाँ तपाईंलाई अरू भन्दा राम्रा कुरा थाहा थियो।
मान्यता प्राप्त पाठकहरू, कृपया हामीलाई यस लेखको बारे आफ्नो दृश्य (हरू) दिनुहोस् र साथै, टिप्पणी सेक्सनमा फुटबलर। उदाहरण को लागी, बायाँ हात फुटबलर को आफ्नो क्यारियर मा अधिक प्रस्ताव छ?